အင်္ဂလန်မှာ လက်သံပြောင်နေတဲ့ ပစ်ခ်ဖို့ဒ် ဘယ်လိုတွေတောင် ချီးကျူးခံနေရသလဲ? – Sports A2Z
အင်္ဂလန်မှာ လက်သံပြောင်နေတဲ့ ပစ်ခ်ဖို့ဒ် ဘယ်လိုတွေတောင် ချီးကျူးခံနေရသလဲ?
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပထမဂိုးသမားနေရာကနေ ပွဲထွက်တစ်နေရာ အခိုင်အမာရယူပြီး နိုင်ငံအသင်းအတွက် ယူရိုအဖွင့် ၅ ပွဲမှာ ပေးဂိုးလုံးဝမရှိတဲ့ အနေအထားမျိုးရောက်အောင်အထိ ယူရိုသမိုင်းရဲ့ ပထမဦးဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်စေခဲ့တဲ့ ဂျော်ဒန် ပစ်ခ်ဖို့ဒ်ရဲ့ လက်စွမ်းထက်မှုဟာ ဒိန်းမတ်နဲ့ပွဲကြိုမှာ အထူးတလည် ချီးကျူးခံနေရပါတယ်။
အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမားဟောင်းကြီး ထရီဗာ ဆင်ကလဲရ်က အဲဗာတန်ဂိုးသမားကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားအဆင့်မှာ စာရင်းပေါက်သွားခဲ့ပြီလို့ ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ခဲ့သလို ဘောလုံးဝေဖန်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပြီး တော်ရုံတန်ရုံ ချီးကျူးခဲတဲ့ အင်္ဂလန်ကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီ နဗီးလ်ကလည်း အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ အမွှမ်းတင်သွားခဲ့တာပါ။
အသက် ၂၇ နှစ်သားကို အခုလောက်ထိ လက်တက်လာလိမ့်လို့ မထင်ထားမိကြောင်း ဆင်ကလဲရ်က ဝန်ခံသွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အမြဲသံသယရှိခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သလို လက်ရှိမှာတော့ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပွဲတိုင်းကစားထားပြီး ဂိုးလုံးဝမပေးရတဲ့ လက်စွမ်းတက်မှုကို အထင်ကြီးမိကြောင်း ဆိုသွားခဲ့တာပါ။
ပစ်ခ်ဖို့ဒ်အနေနဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲကာလ သက်တမ်းတခုအတွင်းမှာ ၅ ပွဲ Clean Sheet ရယူထားဖူးတဲ့ စပိန်ဂန္ထဝင်ဂိုးသမားဟောင်း အီကာ ကာဆီးလက်စ်ရဲ့ စံချိန်ကိုပါ လိုက်မီသွားခဲ့တာပါ။ လာမယ့် ဒိန်းမတ်နဲ့ကစားမယ့် ယူရိုဆီမီးပွဲမှာ ထပ်မံပြီး Clean Sheet ရယူနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကာဆီးလက်စ်ရဲ့ စံချိန်ကို ရိုက်ချိုးပြီး ၆ ပွဲဆက် Clean Sheet ရယူနိုင်တဲ့ ပထမဆုံးဂိုးသမားဖြစ်လာဖွယ်လည်း ရှိနေတာပါ။
“ပစ်ခ်ဖို့ဒ်ရဲ့ လက်စွမ်းကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ တော်တော်နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်မိတယ်။ သူက အားကစားစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာ အခုလို တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရတာပါ။ ဒါဟာ သူ့စိုက်သမျှ ပြန်ရိတ်သိမ်းနေတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်စွမ်းတက်အောင်လုပ်ဖို့ ဒီလိုမျိုး သူဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကို ကျွန်တော် အရမ်းအထင်ကြီးမိပါတယ်”
“အရင်ကဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က သူ့ကို မကြိုက်မိပါဘူး။ ဂိုးဖမ်းတဲ့နေရာမှာ တည်ငြိမ်မှု မရှိခဲ့လို့ပါ။ ဂိုးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ဂိုးဖမ်းတဲ့ဟန်က မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်မှုက ပစ်ခ်ဖို့ဒ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပေးဂိုးမရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပြီး Clean Sheet တွေရယူနိုင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ရိုးအမှန်ပါ”
“သူက အရိုးရှင်းဆုံးအရာတွေကို အထိရောက်ဆုံးလုပ်ပြပြီး ကျွန်တော်မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့သလို အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ ကစားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ကျေနပ်ပါတယ်။ သူ့ပုံစံကို ကြည့်ရတာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေထဲက တစ်ဦးလို့တောင် ဆိုနိုင်ပြီဆိုတဲ့ အခြေအနေပါ”လို့ အင်္ဂလန်မျိုးဆက်သစ်ဂိုးသမားကို ဂုဏ်ပြုမိကြောင်း ဆင်ကလဲရ်က ထပ်လောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ZAWGYI: ယူ႐ို ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ အဂၤလန္လက္ေ႐ြးစင္အသင္းအတြက္ ပထမဂိုးသမားေနရာကေန ပြဲထြက္တေနရာ အခိုင္အမာရယူၿပီး ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ ယူ႐ိုအဖြင့္ ၅ ပြဲမွာ ေပးဂိုးလုံးဝမရွိတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေရာက္ေအာင္အထိ ယူ႐ိုသမိုင္းရဲ႕ ပထမဦးဆုံးအသင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ေစခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ္ဒန္ ပစ္ခ္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ လက္စြမ္းထက္မႈဟာ ဒိန္းမတ္နဲ႔ပြဲႀကိဳမွာ အထူးတလည္ ခ်ီးက်ဴးခံေနရပါတယ္။
အဂၤလန္ေဘာလုံးသမားေဟာင္းႀကီး ထရီဗာ ဆင္ကလဲရ္က အဲဗာတန္ဂိုးသမားကို ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ဂိုးသမားအဆင့္မွာ စာရင္းေပါက္သြားခဲ့ၿပီလို႔ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ခဲ့သလို ေဘာလုံးေဝဖန္သူအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ ခ်ီးက်ဴးခဲတဲ့ အဂၤလန္ကစားသမားေဟာင္း ဂယ္ရီ နဗီးလ္ကလည္း အဂၤလန္အသင္းရဲ႕ ယူ႐ို ၂၀၂၀ မွာ အေကာင္းဆုံးကစားသမားလို႔ အမႊမ္းတင္သြားခဲ့တာပါ။
အသက္ ၂၇ ႏွစ္သားကို အခုေလာက္ထိ လက္တက္လာလိမ့္လို႔ မထင္ထားမိေၾကာင္း ဆင္ကလဲရ္က ဝန္ခံသြားခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို အၿမဲသံသယရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သလို လက္ရွိမွာေတာ့ အဂၤလန္အသင္းအတြက္ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ပြဲတိုင္းကစားထားၿပီး ဂိုးလုံးဝမေပးရတဲ့ လက္စြမ္းတက္မႈကို အထင္ႀကီးမိေၾကာင္း ဆိုသြားခဲ့တာပါ။
ပစ္ခ္ဖို႔ဒ္အေနနဲ႔ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲကာလ သက္တမ္းတခုအတြင္းမွာ ၅ ပြဲ Clean Sheet ရယူထားဖူးတဲ့ စပိန္ဂႏၴဝင္ဂိုးသမားေဟာင္း အီကာ ကာဆီးလက္စ္ရဲ႕ စံခ်ိန္ကိုပါ လိုက္မီသြားခဲ့တာပါ။ လာမယ့္ ဒိန္းမတ္နဲ႔ကစားမယ့္ ယူ႐ိုဆီမီးပြဲမွာ ထပ္မံၿပီး Clean Sheet ရယူႏိုင္ဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကာဆီးလက္စ္ရဲ႕ စံခ်ိန္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးၿပီး ၆ ပြဲဆက္ Clean Sheet ရယူႏိုင္တဲ့ ပထမဆုံးဂိုးသမားျဖစ္လာဖြယ္လည္း ရွိေနတာပါ။
“ပစ္ခ္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ လက္စြမ္းကို ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္မိတယ္။ သူက အားကစားစိတ္ပညာရွင္တစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္မွာ အခုလို တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရတာပါ။ ဒါဟာ သူ႔စိုက္သမွ် ျပန္ရိတ္သိမ္းေနတာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လက္စြမ္းတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဒီလိုမ်ိဳး သူဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တာကို ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းအထင္ႀကီးမိပါတယ္”
“အရင္ကဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က သူ႔ကို မႀကိဳက္မိပါဘူး။ ဂိုးဖမ္းတဲ့ေနရာမွာ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိခဲ့လို႔ပါ။ ဂိုးသမားတေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဂိုးဖမ္းတဲ့ဟန္က မလုံေလာက္ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္ထင္ျမင္မႈက ပစ္ခ္ဖို႔ဒ္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေပးဂိုးမရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၿပီး Clean Sheet ေတြရယူႏိုင္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့႐ိုးအမွန္ပါ”
“သူက အ႐ိုးရွင္းဆုံးအရာေတြကို အထိေရာက္ဆုံးလုပ္ျပၿပီး ကြၽန္ေတာ္မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သလို အာ႐ုံစူးစိုက္မႈအျပည့္နဲ႔ ကစားခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္ေက်နပ္ပါတယ္။ သူ႔ပုံစံကို ၾကည့္ရတာ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးဂိုးသမားေတြထဲက တစ္ဦးလို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ၿပီဆိုတဲ့ အေျခအေနပါ”လို႔ အဂၤလန္မ်ိဳးဆက္သစ္ဂိုးသမားကို ဂုဏ္ျပဳမိေၾကာင္း ဆင္ကလဲရ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
6 Jul ညခင်းပိုင်း နောက်ဆုံးရ လီဗာပူးလ်သတင်းများ စုစည်းမှု
အီတလီနဲ့ စပိန်ပွဲမှာ ဘယ်ကစားသမား ၅ ဦးက ထိပ်တန်းအဆင့်ဖျော်ဖြေမှုကို ပေးစွမ်းလာမှာလဲ?